Fomba fanoharana 5 hafa hanome aingam-panahy anao | Famoronana an-tserasera
Eritrereto fanoharana. Ho an'ny. Karazana fanoharana inona no noeritreretinao? Voasarika amin'ny fomba mitovy foana ve ianao.
Ireto ambany ireto dia nanao fanangonana voafantina misy sary an-tsary 5 misy karazany 5. Hahazo aingam-panahy ianao amin'ny fomba fanaovan'izy ireo zavatra, ny lokon'ny lokony, ny andalana ary ny tohin'izy ireo ... Mihevitra azy ireo ve izahay fa mijery azy ireo?
Fomba 5 hafa, sary 5 hafa
Eiko Ojala, sary an-taratasy
Eiko Ojala dia mpaka sary sy mpamorona sary monina any Estonia. Raha ny mahazatra dia miasa nomerika izy ary misintona tanana ny zava-drehetra. Amin'ny fizotrany mamorona dia tiany ny mandany fotoana amin'ny fianarana aloka, ary fantany tsara ny fombany.
Fanoharana niomerika nataon'i Denis Gonchar Miasa miaraka amin'ny takelaka izy, mitovy amin'ny fomba fanaon'ny mpanao hosodoko amin'ny lambany. Kapoka malaky, amin'ny lafiny maro, ny tsy fahalavorariana mahazatra mandoko, tsipika mandalo izay mihoatra ny faritry ny hetsika ary mamela ny marika ho hadisoana ... Fanoharana nataon'i Denis, Toa mandinika ny fampisehoana sary hosodoko hampiasaina aho. Hitako fa ny ezak'i Denis hitondra sary hoso-doko nomerika ka akaikin'ny sary hosodoko nentim-paharazana dia mampino sy manintona tokoa.
Sary an-tsipika nataon'i Stavros Damos sary indraindray. Sariitatra indraindray. Indraindray fifangaroana eo amin'izy roa. Fomba hafa noho ny teo aloha ary hitantsika tamin'ny fanontana taratasy. Fomba alokaloka sy fandokoana izay midina avy amin'ny fotoana sokitra, izay nanaovan'ny frame ireo zava-drehetra. Tsy misy isalasalana, fomba izay manana ny hatsarany ary mbola mitia ankehitriny. ny Stavros Damos portfolio tsy misy fako io.
Morgan Davidson, sary miloko pensily miloko amin'ny 21, tonga nampatsiahy antsika ity mpianatra amerikana ity fa ny pensilihazo miloko dia mety hanao sary mahaliana ihany koa. Ary raha tsy izany dia lazain'izy ireo amin'ny fandalinana vorombola izay nataony. Afaka mahita bebe kokoa ny fahaizany ianao ao amin'ny azy Tumblr portfolio.
Sary eo amin'ny rindrin'i Antonio Segura Donat
Graffiti valencien tsara Antonio Segura Donat. Izany, indrindra, dia natao ho an'ny tarehy ho an'ny foiben'ny tanora. Iza no tsy hiditra? Fantatra amin'ny anarana hoe Dulk, izy dia mamaritra ny tenany ho toy ny mpanao fanoharana eny an-dalambe noana sy tsy mety afa-po izay mihetsika amin'ny sehatry ny kanto an-dalambe, sary ary famolavolana sary. Anisan'ireo fitaoman-doko lehibe indrindra ananany ny tenebrimo an'i Caravaggio sy ny fiheverana amin'ny antsipirihany ny sary hosodoko Flemish. Nilaza i Antonio fa mahafinaritra ny mamorona litera sy tantara mifototra amin'ny nofinofiny manokana sy ny zava-mitranga isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fomba fanoharana 5 hafa hanome aingam-panahy anao
Fanesoesoana kalitao premium latsaky ny € 10